March | 2009 | The World of Pinkgold
Characteristics of Sharp Women
Posted on March 31, 2009 by cuttiepinkgold
Wow!! ဒီနေ့တော့ စောစောစီးစီးပဲ WordPress ကို ၀င်လို့ရသွားပြီရှင့်။ Endless Error ဆိုတဲ့ ပိုစ့်ကိုတောင် ခေါင်းစဉ်ပြောင်းရမလို ဖြစ်နေပြီ။ ၀င်လို့ရတုန်းလေး ပင့်ဂိုလ်းက၀ိ ပညာရှိ ရေးသားထားတဲ့ ထက်မြက်သော မိန်းမ၏ ကြန်အင်လက္ခဏာများကို ခပ်မြန်မြန်လေးပဲ တင်လိုက်ရပါတယ်ရှင့်။ ကိုယ်တိုင်တွေး၍ ကိုယ်တိုင်ရေးတာ ဖြစ်လို့ လွပ်လွပ်လပ်လပ် သဘောထားများ ကွဲနိုင်ပါသည်။ ဖြည့်သင့် ပြင်သင့် ဖယ်သင့်သည်များကို comment တွင် ရေးချန်ထားခဲ့ကြပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ တရားဝင် ထုတ်ပြန်လို့ရအောင်.. အဟီး
1.	ထက်မြက်သော မိန်းမဟူသည် ကိုယ်လျှောက်ရမည့် လမ်းကို ကိုယ်သိပြီး တစ်ဖက်စွန်းမရောက်ပဲ ဘ၀တွင် အရေးပါသည့်အရာ မှန်သမျှကို မျှအောင် ချိန်တတ်သောသူဖြစ်သည်။
2.	ပညာရေး၊ အချစ်ရေးနှင့် လူမှုစီးပွားရေးများကို သမအောင် ရောမွှေတတ်ပြီး ချမ်းသာသုခကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်သူ ဖြစ်သည်။
3.	ကျောင်းများ အလုပ်ခွင်များတွင် တော်ပြီး ထက်မြက်သလို ကြင်ယာအတွက်လည်း နားလည်ပေးဆပ်နိုင်သူ ဖြစ်သည်။
4.	ဆုံးရှုံးမှု တစ်ခုအတွက် ၀မ်းနည်း မနေတတ်သလို၊ တစ်ခုတည်းသော အောင်မြင်မှုနောက်ကိုလည်း တစ်ကောက်ကောက် မလိုက်တတ်ပေ။
5.	အချစ်၏အရေးပါမှုကို သိရှိနားလည်ပြီး ဘ၀အောင်မြင်မှုများအတွက်လည်း ချစ်ခြင်းနှင့်အတူ တိုက်ပွဲဝင်တတ်သူ ဖြစ်သည်။
6.	Flexible ဟူသော သဘောတရားကို နားလည်ပြီး သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက်မျှတအောင် နေထိုင်ကာ ကိုယ်ရှင်သန်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်း စံနမူနာ ယူထိုက်သူအဖြစ် နေထိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
7.	ပညာတတ်သော မိန်းမတိုင်းသည် ထက်မြက်သော မိန်းမ မဟုတ်သလို၊ ထက်မြက်သော မိန်းမတိုင်းသည်လည်း ဘွဲ့ပေါင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ချင်မှ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပေလိမ့်မယ်။
8.	ခေတ်မီ၍ အတွေးအခေါ်များ ရှင်သန်ထက်မြက်ခြင်းသည် ဘွဲ့ပေါင်းများစွာကြောင့် မဟုတ်ပဲ စာများများဖတ်၍။ ဗဟုသုတ ရှာမှီးခြင်းမှ ရလာသော အရာများလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
9.	ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်တွင်လည်း အတ္တမများပဲ ကိုယ်တိုင်ရပ်တည်နိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
10.	အဆုံးတွင်ကား ထက်မြက်သော မိန်းမဟူသည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အောင်မြင်ပြီး အိမ်ထောင်ရေးတွင် ပျော်ရွှင်သော သူများဖြစ်သည်ဟု တွံ သင်တို့သည် ဂဏှာဟိ မှတ်လော့။
Filed under တွေးတွေးရေးရေး and tagged women |	13 Comments
Posted on March 30, 2009 by cuttiepinkgold
ဘလောဂ့်လည်း မရေးဘူး.. အသစ်လည်း မတင်ဘူးတဲ့.. ကျွန်မကို ပြောနေကြလေရဲ့။ တစ်ကယ်က ပိုစ့်တွေတင်ချင်ပါတယ်။ ရေးဖို့စဉ်းစားထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.. ကော်နက်ရှင်က ပိုးစိုး ပက်စက်ကိုနှေးနေတာ… ဘာဆို ဘာမှကို လုပ်လို့မရဘူးလေ။ Google ပဲတက်ပြီး ကျန်တာ ဘာမှကို မတက်တာ။ Gmail ၀င်ဖို့အရေး F5 ကို အခါ 100 လောက်နှိပ်ပေးရလွန်းလို့ သူ့ခမျာလည်း တော်တော်နဲ့နေပြီ။ WordPress ကလည်း homepage ပဲတက်ပြီး Log in လည်းဝင်လိုက်ရော အယ်ရာတက်သွားရော။ ကျန်တဲ့ ကိုယ်ကြည့်နေကျ website တွေလည်း အကုန် Access Denied ဖြစ်ကုန်တော့တာပါပဲ။ ပုဂံနက်ကလူတွေလည်း ပြင်ရင်းများ ပိုပျက်သွားသလား မပြောတတ်ပါဘူးရှင်.. အစက ငါးရက်နဲ့ ပြင်ပြီးမယ်ပြောတာ သိတော်မူကြတဲ့အတိုင်း ဆယ်ရက်ဖြစ်သွားတယ်။ ဧပရယ် (၁) ရက်နေ့ ပြန်ကောင်းမယ် ပြောတာတောင် ဧပရယ်ဖူးလ် လုပ်တာ ဖြစ်ချင် ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ နေရာက ဒါလည်း စိတ်ညစ်စရာ တစ်ခုကောင်းတယ်။
WordPress ကို ၀င်လိုက်တာနဲ့ အပေါ်မှာ မြင်ရသလိုမျိုး ဖြစ်သွားပါလေရဲ့။ ဒါတောင် Proxy ကျော်ပြီး ၀င်လာတာ။ ဘာပရောက်ဆီလဲဆိုတော့ အင်း မပြောတော့ပါဘူး။
Filed under ရောက်တတ်ရာရာ |	5 Comments
Posted on March 21, 2009 by cuttiepinkgold
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ ခံယူချက်တွေဆိုတာ အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေတတ်တာပါပဲ။ မပြောင်းလဲလို့လည်း မရဘူးလေ.. ဒီနေရာမှာ ဒီလိုတွေးပေမယ့် ဟိုနေရာ ရောက်ရင်တော့ ဟိုလိုတွေ ပြောင်းတွေးမှ ဖြစ်မယ့်အရာတွေကလည်း ရှိတာကို။ ဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာကြီးမှာ လူတွေက အားနေရင် Change Change Change ဆိုပြီး အော်နေကြတာပေါ့။ ကျွန်မလည်း သိပ်တော့စိတ်မှန်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခုတော့ လတ်တလောမှာ ခံစား ဖြစ်ပျက် တွေးမိနေတာလေးကို ဘာရယ်မဟုတ် ချရေးချင်စိတ်ပေါ်လာလို့ပါ။
ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်……………………………ဗြုတ်စဗျင်းတောင်း ရီဗြူးနှင့် စကားပြောသော အက်ဆေးများ (သစ္စာနီ)
အပြောများနေတဲ့ စကားလုံးက…………….. ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား၊ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရှုပ်နေရတဲ့ အထဲ.. ကြားထဲက ထပ်ရှုပ်နေတဲ့သူမျိုးက ရှိသေးတယ်
တွေးမိနေတဲ့အတွေးက…………………………အလုပ်ဟုတ်တဲ့ နေရာမှာ စွာရင်တော့ ထက်မြက်တာလို့ နာမည်ထွက်ပြီး၊ အလုပ် မဟုတ် တဲ့နေရာမှာ စွာရင်တော့ ကက်ကက်လန်လို့ နာမည်ထွက်လိမ့်မယ်
ရွတ်ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းစာသား……………. မမြင်တာ မဆုံတာကြပေမယ့် ရင်မှာအမြဲတမ်း မင်း ရှိတယ်
အလုပ်များနေတာက………………………. သင်္ကြန် Greeting Card တွေကြောင့်
စားဖြစ်နေတာက…………………………….ရုံးပတီသီးကြော် (ခုတလော တော်တော် အာတွေ့ လျှာတွေ့ ဖြစ်နေတယ်)
လုပ်ချင်နေတာက………………………… အိမ်တွင်းပုန်း (လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတာ ခုတလော နည်းနည်း စိတ်ကုန်နေတယ်..)
သွားချင်နေတာခရီးက………………………ကမ်းခြေတစ်နေရာ (စိတ်ကိုထွက်ပေါက်ပေးဖို့ ပင်လယ်ကြီးကို ကြည့်ပြီး အော် ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်နေလို့)
ရေးချင်နေတဲ့အကြောင်းက …………………လူတွေကြားက နားလည်မှုတွေအကြောင်း (မရေးတတ်တော့လည်း ခက်တယ်)
မပေးမဖြစ် ပေးနေရတာက ………………… မင်္ဂလာဆောင် လက်ဖွဲ့တွေ (ကိုယ်သာ မင်္ဂလာဆောင်ရင် အဲ့လူတွေကို ဘယ်မှာရှာရမယ်မှန်းတောင် သိမှာမဟုတ်ဘူး)
အတွေ့ချင်ဆုံးသူက ………………………… သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို (ပြောချင်တာ ပြောပြီး အားရ ပါးရကို ဖက်ငိုချင်တာ)
လိုချင်နေတာက …………………………… အမွေးပွပွ ၀က်ဝံရုပ် (နောက်နေ့သွားဝယ်မယ်.. မရတော့ဘူး)
ဖြစ်ချင်နေတာက ……………………………အချစ်ဦးရဲ့ နောက်ဆုံးချစ်သူ
ချစ်မိနေတာက ………………………………သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို
မုန်းနေတာက …………………………………နိုး နိုး ဒီ စိတ်တော့ မ၀င်အောင်နေတယ်
နားမလည်တာက …………………………… တစ်ချို့မိန်းမတွေကို
၀ယ်ဖြစ်တာက ……………………………… ဂျင်းပန် အနက်တစ်ထည်
မလုပ်မဖြစ် လုပ်နေရတာက ……………… စာကျက်နေရတယ် (အသဲ အသန်ကိုပဲ)
တော့င့်တမိတာက …………………………… အားပေးနှစ်သိမ့် ဖေးမပေးမယ့် ပခုံးတစ်စုံ
ခေါင်းထဲမှာ ခဏ ခဏ ၀င်လာတတ်တာက …………… တော်အောင် ထက်အောင် ငါ ဘာလုပ်ရမလဲ
ပြောချင်နေတဲ့ စကား………………………………ဒီပိုစ့်ကို ဒီမှာပဲ အဆုံးသတ်လိုက်တော့မယ် 😛
Filed under ရောက်တတ်ရာရာ and tagged feeling |	8 Comments
Longing for “Mee”
Posted on March 5, 2009 by cuttiepinkgold
မီးမလာတဲ့ နေ့တွေ ညတွေအလယ်
ရှင်သန်ရတာ ငါတစ်ကယ် မောတယ်…။
ရန်ကုန်မြို့မှာ ခုတလော မီးက အတော်လေးကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးပျက်နေတယ်။ နေ့လည်ဘက်လည်း မလာ၊ ညနေဘက်လည်းမလာ။ လာပြန်တော့လည်း ၁၅ မိနစ်၊ နာရီဝက်ထက် မပိုဘူး။ တစ်ခါ တစ်လေတော့လည်း သုံး လေး နာရီလောက် ကြာကြာ လာပေးတတ်ပါတယ်။ အချိန်က ည ၂ နာရီတို့၊ မနက် ၄ နာရီလောက်တို့။ ဘာလုပ်ရမှာလဲ.. တစ်နေကုန် ပင်ပန်းလာလို့ အိပ်မောကျနေတဲ့ကြတဲ့ ကျွန်မတို့လို လူမျိုးတွေအတွက် အဲဒီအချိန်မှာမှ မီးလာပေးလို့ ဘာလုပ်နိုင်မှာလဲ။
နွေရောက်ပြီ။ ရာသီဥတု ပူသည်။ မီးမလာလို့ ပိုပူသည်။ မီးမလာလို့ ရေမလာသည့် နေ့တွေလည်း ရှိသည်။ မီးမလာလို့ ညဘက်တွေ ၀ရံတာမှာ ယပ်တောင် တစ်ချောင်းနဲ့ ယပ်ခပ်ပြီး အချိန်သွားသည့် နေ့မျိုးတွေလည်း များလှပြီ။ သြော်.. ရက်စက်ပါ့ မီးရယ်။ EPC က ကိုကိုတွေများ အချောင်သဘောနဲ့ ဆီခိုးနေတာလားကွယ်။
မီးမလာတော့… စာမကျက်ချင်ဘူး။ မီးမွှေးရတာ ဒုက္ခရောက်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မီးကို အားကိုးပြီး အလုပ်လုပ်လို့ မရမှန်းတော့ သိတာပေါ့ မီးရယ်။ ဒါပေမယ့် ခုဟာက လွန် လွန်း နေလို့ပါကွယ်။ အရင်တုန်းက ၁၁ နာရီလာ ၅ နာရီပြတ်ဆိုတဲ့ အချိန်မျိုးတွေ ရှိသေးတော့ မီးလာမယ့် အချိန်ကို မျှော်ရတာ အားရှိတာပေါ့။ မီးလာလို့ ကလေးတွေရဲ့ ဟေးးးးးးးးးး ခနဲ အော်သံကလည်း မင်္ဂလာရှိတဲ့ အသံပါပဲ မီးရယ်။ ခုတော့ မီးက လာချင်သလိုလာ.. ပြန်ချင်သလိုပြန်နဲ့ မီးကိုများ စောင့်နေရင် ဘ၀ပျက်သွားနိုင်တယ်။
မြန်မာပြည်မှာ နေမိမှတော့ မီးနဲ့ အချိန်တိုင်းဆုံခွင့် မရှိမှန်း နားလည်ပါတယ် မီးရယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်၊ လာချင်သလို လာနေတာမျိုးထက် စာရင် အရင်လိုမျိုး အချိန် အကန့် အသတ်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ် လာပေးပါလားကွယ်။ အချိန်နဲ့မျှော်၊ အချိန်နဲ့ လုပ်ရတာဟာ.. မရေရာတဲ့ ဗလာသက်သက်ထက်စာရင် ကောင်းကျိုးတော့ ရှိသေးတယ် မဟုတ်လား။
မီးကို အရင်လိုအမြဲ ပြန်တွေ့ရဖို့ဆိုတာ ငါ့အတွက်တော့ အိပ်မက်မက်တာလောက်တောင် မသေချာတဲ့ ကိစ္စမျိုးပါလား မီးရယ်။
Filed under ရောက်တတ်ရာရာ and tagged electrocity, myanmar |	11 Comments